नयाँ काम सुरु गर्नुअघि थाहा पाउनुहोस् चाणक्यको यी सुत्र - dautarimedia.com
हाम्रो चाहना सत्हे समाचार !!!
नयाँ काम सुरु गर्नुअघि थाहा पाउनुहोस् चाणक्यको यी सुत्र
sanjay August 12, 2021 1 min read
चाणक्य एक बुद्धिमान, चतुर र प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थिए । कुनैपनि नयाँ काम गर्नुअघि के गर्ने ? उनै चाणक्यको सूत्र यहाँ उल्लेख गरिएको छ । किनभने कुनैपनि काम प्रारम्भ गर्नुअघि हामीलाई द्विविधा हुन्छ, त्यसले सफलता दिलाउला कि असफलता ? आफुले सुरु गरेको कामबाट निर्धक्क सफलता हासिल गर्नका लागि चाणक्यको यी सुत्र मनन गर्नैपर्छ ।
सधै राखौं सकारात्मक सोंच: चाणक्यका अनुसार कुनैपनि नयाँ काम सुरु गर्नुअघि सोंच सकारात्मक हुनुपर्छ । त्यसबाहेक आफुले काम गर्ने समय, स्थान, लगानीबारे पनि हेक्का राख्नुपर्छ । आफुलाई उत्त काममा सहयोग गर्ने कति व्यक्ति छन् ? यसबारे पनि जान्नुपर्छ ।
आफ्नो क्षमताको हिसाब लगाउनुपर्छ: आफुले हात हाल्न लागेको काम कस्तो प्रकृतिको हो ? जान्नैपर्छ । काम गर्नुअघि आफ्नो क्षमताको पनि आंकलन गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गरिएन भने कहिं न कहिं समस्यामा फसिन्छ ।
बोली, व्यवहार बदलौं: रुखो बोली र व्यवहार कसैलाई रुचीकर हुदैन । त्यसैले सबैको अगाडि सौहार्द्धपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुने अभ्यास गरौं । जति मीठो बोली बोलिन्छ, जति मीठो व्यवहार गरिन्छ, उत्तिनै सफलता हात लाग्ने हो ।
सत्रुलाई साथी बनाउने: सबैसँग राम्रो व्यवहार गरेपछि तपाईको सत्रु कोहि हुँदैन । कसैसँग बदलाको भावनाले वा देखासेखीका लागि कुनैपनि काम नगरौं ।
शरीरको पनि ख्याल गरौं: कामको चक्करमा लागेर हामी शरीरको ख्याल गर्न भुल्छौ । यद्यपी शरीर जति स्वास्थ्य भयो, जति तन्दुरुस्त भयो, उत्तिनै पर्फमेन्स बढ्ने हो ।
गोपनियता अपनाउने: आफुले कस्तो काम सुरु गर्न लागेको हो ? यसको आइडिया अरुलाई शेयर नगरौ । आफ्नो योजना दोस्रो व्यक्तिलाई बताउनु हुन्न ।
Previous: के तपाईं ‘यौनिक’ कुराकानीमा रमाउँदै हुनुहुन्छ ?
Next: महिलाहरुलाई कुन समयमा से’क्स गर्न बढी चाहना हुन्छ ? विस्तृत विवरणसहित
यी महिलाले कपडा, मोबाइल र चेक लगायतका सामान किनारमै छाडेर भेरी नदीमा
गाईले जन्मायो तीन वटा बाच्छी जन्मायो, लक्ष्मीको संज्ञा दिँदै गाइलाई हेर्न आउनेको भिड
के तपाईले चिन्नुभयो यस सुन्दर बलिउड अभिनेत्रीलाई ? क्यामरामा कैद भए बो:ल्ड अन्दाज !
प्रबन्ध निर्देशक/प्रधान सम्पादक : संजय रावल
अफिसियल फोटोग्राफर : प्रिन्स रावल
बजार प्रबन्धक : बिज्ञान खड्का
एउटा तीतो यथार्थ के छ भने नेपाली समाजमा फिल्मलाई अझ गम्भीर रुपमा लिइदैन ।
हल्का र टाइमपास जस्तो मात्र ठानिन्छ । प्रगतीतर्फ उन्मुख भए पनि कलाकर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ साँघुरो छ ।
र, यो सम्मानभावलाई अझ चुचुरोमा पुराउँदै फिल्म उद्योगप्रति सबैले सम्मान गर्ने माहौल सिर्जना गर्नु दायित्व पत्रकारिताको पनि हो ।
हामीले यसलाई अनुग्रह भन्दा कर्तव्य ठानेका छौं । त्यस्तै, कलाकार र दर्शकबीचको दुरी कम गर्दै फिल्मप्रति अपनत्व भाव विकास गर्न पनि हामी खुलेर लाग्नेछौं ।